Betsaka ireo efa nahazohazo taona no liana tamin’ny fampianarana ny teknika famerenana ny fahasalamana. Nanomboka ny 2 ary hifarana rahampitso alahady 4 novambra 2018 eny amin’ny Live hôtel Andavamamba ity seminera goavana ity . “Misy fanafany avokoa ny aretina rehetra na dia ny homamiadana aza”, hoy ny dokotera Gilbert Darsot. Nampihomehy ny olona sasany ny hoe “antitra ho lasa tanora” kanefa mitombona tanteraka izany. Efa nisy ny fanandramana nataon’ny manam-pahaizana rosianina, Grigori Gravoboi. Araka ny fitantaran’i dokotera Darsot izay mpianatr’i Grigori fa nisy antitra iray nararin’ny raboka ka tsy tao intsony ny havokavokany. Rehefa nojeren’i Grigori izany dia niverina niforona ny havokavokan’io olona io. Azo averina amin’ny laoniny tahaka namoronan’ilay Mpahary ny taova tamin’ny voalohany ny taovan’olombelona rehetra na dia efa antitra aza. Izay no mahatonga hoe ny antitra ho lasa tanora satria miverina tamin’ny mbola tanora ny tanjaka sy hery. Tsy vitan’izany fa mijanona ho salama lalandava.
Amin’ny lalan’ny fampiasana antontan’isa sy fifantohana ny teknikan’i Grigori Gravoboi. Tao anatin’ny telo andro, betsaka ireo mpanatrika no nahita voka-tsoa sahady. Ramatoa iray voan’ny homamiadan’ny nono nanatrika ity seminera ity. Misy ny teknika natokana ho an’ny homamiadana. Rehefa nanomboka nampiasana ny fahalalana nomena azy izy dia nanomboka nisy fiovàna ny fahasalamany. Ankoatra ny famerenana ny fahasalamana dia afaka hifehezana ny tontolo manodidina toy ny fiarovana amin’ny loza, fampandehanana tsara ny fizotry ny fitadiavam-bola… ny fampianaran’i Grigori Gravoboi.
‹ PRODUIT D’HYGIÈNE : Société Hydis fidélise ses clients	› BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA: Nihena ny tahan’ny vidim-piainana